Qodobbada Salaadda si looga gudbo caqabadaha nolosha. | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda si looga gudbo caqabadaha nolosha.
Qodobbada Salaadda si looga gudbo caqabadaha nolosha.
Rooma 5:17 Maxaa yeelay, nin dembigiisa aawadiis nin keliyahu xukunkiis buu ku xukumay, Intee ka badan ayay kuwa hela badnaanta nimcada iyo hadiyadda xaqnimada nolol ku xukumi doonaan mid keliya, kaas oo ah Ciise Masiix.)
Ilmo kasta oo Ilaah wuxuu u dhashay si uu u guuleysto, waxaan ka guuleysaneynaa dhalashada cusub.Bogga 1 Yooxanaa 5: 4, wuxuu inoo sheegayaa in wax alla wixii Ilaah ka dhasha, uu ka adkaado adduunka. “Adduunyada” halkan macnaheedu waxa weeye labadaba nidaamka adduunka iyo shaqooyinkiisa iyo Caalamka oo dhan. Haddii aad tahay ilmo Eebbe, oo mar labaad dhashay, noloshan waxba kaa adkaan maayaan. Ma jiro wax caqabad ah, oo aad ku wajahayso midig, oo aanad ka adkaan karin. Nolosha, ma aha dembi inuu ilmo Ilaah yeesho caqabado, laakiin taa beddelkeeda, waa heshiis diidmo in ilmo Ilaah looga adkaado caqabado.
Maanta, waxaan eegi doonaa qodobbada salaadda si looga gudbo caqabadaha nolosha. Tan qodobbada salaadda wuxuu kugu hagaajin doonaa wadada guusha inta aad nolosha ku dhex jirtid, sidoo kale waqtiga aad dhammeyso akhrinta maqaalkan, waxaad yeelan laheyd maskaxda qofka guuleysta.
Kobcinta Maskaxda Guusha.
Mark 9:23 Ciise wuxuu ku yidhi, Haddaad rumaysan karto, wax waluba waa u suurtoobaan ka rumaysan.
Si aad u noqoto guuleyste, waa inaad marka hore barataa inaad u fikirto sidii guuleyste. Baybalku wuxuu noo sheegayaa “sida nin qalbigiisa qalbigiisa ugaga fikiro, waa sidaas oo kale”. Waxay qaadataa maskaxda saxda ah si loo helo natiijada saxda ah. Markos 9: 23, wuxuu noo sheegayaa in iimaanka aan ku qaban karno wax aan macquul aheyn, sidaa darteed ilaa iimaankaagu meesha ku jiro, waligaa kama adkaan kartid caqabadaha nolosha.
Sideed u horumarin kartaa maskaxda saxda ah? Iyada oo ereyga Ilaah, Ereyga Eebbe wuxuu dhistaa iimaankeena, oo iimaanku wuxuu ina siiyaa maskax saxda ah ama maskaxda aan ka adkaan karno. Mu'miniintu ma adkaan karto nolosha la'aanteed rumaysad la'aan, 1 Yooxanaa 5: 4.
In badan oo rumaystayaal ah ayaa maanta laga adkaaday nolosha, maxaa yeelay kuwa qaldan fikir qaldan, garan maayaan cidda ay Ciise Masiix ku jiraan. Ilaa maskaxdaadu saxan tahay, waxaad sii wadi doontaa inaad soo saarto natiijooyin qaldan nolosha. Ilaa aad ka bilowdid inaad naftaada u aragto mid ku guuleystay nolosha, weligaa kama adkaan kartid caqabadahaaga. Waa inaad maskaxdaada cusbooneysiisaa marwalba ereyga Eebbe, si aad u sii wado u aragto guul noloshaada. Tusaale ahaan, salaaduhu waa wadada laga baxo caqabadaha, laakiin ku ducaynta fikirka qaldan ma soo bixin doonaan wax natiijo fiican ah.
Waa inaad maskaxdaada u horumarisaa tan ilmaha Ilmaha. Baybalku wuxuu noo sheegayaa inaynu nahay cibaado ilaahay, riyo ayaa waligeed dhalan doonta ari kale, oo Eebbe wuxuu dhalaa ilaahyo isaga oo kale ah. Haddii aad ka dhalatay Ilaah, waxaad tahay ilaah adduunkan. Sidaa darteed waxkasta oo aan Allah joojin karin ma joojin karaan. Wax kastoo Eebbe ka adkaan kara ma adkaan karo. Markaad ku tukanaysid ilaahkan maskaxdiisa murugsan, waxaad ku qasban tahay inaad aragto natiijooyin wanaagsan. Hadda aan eegno sida looga gudbo caqabadaha rumaystaha ahaan.
Sida looga gudbo caqabadaha nolosha
Mat 17:20 Ciise wuxuu ku yidhi, Waa rumaysadyaraantiinna aawadeed, runtii waxaan idinku leeyahay, Haddaad leedihiin rumaysad iniin khardal le'eg, waxaad buurtan ku odhan doontaan, Halkan ka tag meeshan; oo isna wuu dhammaan doonaa; oo waxba ma awoodi doonaan.
Rumaysad la'aan, kama adkaan kartid tijaabooyinka nolosha. Faith waa hubkeenna difaaceed ee ka dhanka ah dhammaan riwaayadaha cadowga, Efesos 6:16. Rumaysadku waxay ka timaadaa maqalka iyo maqalka ereyga Ilaah, Rooma 10:17. Haddii ay tahay inaad cimilada dabaysha nolosha aad ku guuleysato, oo aad ku guuleysato dagaaladaaga, waa inaad noqotaa haweeney ama nin aamin ah. Waa inaadan waligaa dhiibin Ilaah iyo naftaada. Iimaanka guuleystaa waa iimaanka hadalka, marka waa inaad la hadashaa caqabadahaaga oo aad ku amartaa inay ku sujuudo magaca Ciise Masiix.
Yacquub 2:18 Haah, nin baa odhan kara, Adigu waxaad leedahay rumaysad, anna waxaan leeyahay shuqullo. I tus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn, oo anna rumaysadkayga shuqulladaydaan kugu tusi doonaa.
Si looga gudbo caqabadaha noloshaada, caqiidadaadu waa inay ku ansaxdo ficillo isbarbar dhiga. Haddii aad rabto inaad buurahaaga guurto, waa inaad guurtaa, ma daawanaysid. Haddii aad rabto in caqabadahaagu ay meesha ka baxaan, waa inaad wax ka qabataa. Iimaan kasta oo aan kugu kicineynin inaad ficil sameyso waa caqiido mas'uuliyad ah, sidaa darteed ma ahan iimaan la'aan.
Buurahaaga la dirira, oo way ka carari doonaan. Haddii aad Ilaah u rumayso wax uun, qaado tallaabooyin aad ku gaadhayso waxaas, oo waxaad arki doontaa meel ay umuuqato inaysan jid jirin. Tusaale ahaan, waxaad u duceyneysaa shaqo, ha fadhiyin guriga kadib markaad tukanaysid, u bax halkaas oo shaqo raadso, u gudbi CV-yadaada shirkado badan intii suurogal ah, taasi waa waxa ficilku ku saabsan yahay. Tukashadu waxay ka kooban tahay 3 talaabo: weydiista, raadinta, iyo garaaca, dhammaan seddexda, raadinta iyo garaaciddu waxay ku lug leedahay ficil jidkaaga, weydiinta kaliya waxay la xiriirtaa muujinta afka ah ee iimaankaaga. (eeg Matayos 7: 7). Qaado tallaabo iimaan hadda oo waxaad arki doontaa caqabadahaaga.
Luk 18: 1 Markaasuu masaal kula hadlay sidan, in dadku had iyo goor tukado inay tukadaan oo aanay taag darnaan.
Tukashadu waa meesha caawimaada rabbaaniga lagu xafido. Ma jiro qof ku guuleysta nolosha caawimaad la'aan, waxaad u baahan tahay kaalmada Ilaah si aad uga guuleysato tijaabooyinka iyo caqabadaha nolosha, markasta oo aad tukatidna waxaad u ogeysiineysaa Ilaah in aadan sameyn karin isaga la'aantiis. Tukashadu waa calaamad muujinaysa ku tiirsanaanta buuxda ee Ilaah. Aniga oo ah hogaamiyaha Ruuxa Quduuska ah, waxaan si taxaddar leh u xushay qodobbada tukashada ee awoodda badan si aan uga gudbo caqabadaha nolosha. Qodobbada salaadda ayaa kuu hagi doona, sida aad ula dagaallanto jidkaaga guusha si looga gudbo caqabadaha nolosha. Laakiin xusuusnow, iyaga ugu duceeya rumaysad, tillaabooyin (tallaabooyin) oo waxaad arki doontaa natiijooyin waaweyn.
1. Aabe, waan kuugu mahadnaqayaa sidii aad igu guulaysatay Ciise Masiix Aamiin
2. Aabo, waxaan u imid carshigaaga nimcada maanta si aad u soo kabsato naxariis iyo nimco si aad uga guuleysato caqabadaha Nolosha magaca Ciise Masiix
3. Aabo, waad ku mahadsantahay awoodaada igu siisay Ruuxa Quduuska ah si aan uga guuleysto caqabadaha igu haysta magaca ciise
4. Rumaysad ayaan ku baabi'iyaa waxkasta oo xun oo sheydaanka ah noloshayda magaca Ciise
5. Awooda Ilaah waa la sii daayay noloshayda, sidaa daraadeed, weligey cadawgu kuma dhici doono magaca ciise
6. Waan jaray iska caabin kasta oo shar leh oo i hor taagan magaca Ciise Masiix
7. Waxaan ku aflagaadiyaa sheegashada shaydaan kasta oo sheydaanka ah waxaan ka leeyahay magaca ciise masiix.
8. Waxaan maanta cadeynayaa in salaant kasta oo gacmaheyga ah lagu shaaciyo magaca Ciise.
9. Waxaan amar ku siinayaa duufa kasta oo xun oo ku dhaca noloshayda inay ahaato 9n magaca Ciise
10. Waxaan ka faa'iidaystay xigmad caqli leh si aan had iyo jeer u ogaado jidka looga baxo dhammaan caqabadaha igu jira ee magaca Ciise.
11. Waxaan ku habaaraa ruuxa faqiirka ah nolosheyda ee ciise magaca Ciise.
12. Waan diidanahay geerida aan dhamaadka lahayn ee nolosheyda ee ciise magaca Ciise.
13. Waxaan cadeynayaa inaan weligey noqon doono nolosheyda weligeyna aanan ku dambeynin magaca ciise masiix.
14. Waxaan farayaa jid kasta oo qalloocan oo hortayda ah in laygu toosiyo hadda !!! in Ciise magaca
15. Wadaad kasta oo shar ah oo aniga iga gees ah, waa in lagu aamiyaa magaca Ciise Masiix
16. Waxaan ku tuuray ruuxa caajisnimo magaca Ciise Masiix.
17. Magaca Ciise ee magaca noloshayda dhexe waxaan ka saaray.
18. Waan diidanahay qallalka nolosheyda ee magaca Ciise Masiix.
19. Waan diidanahay jirkeyga nolosheyda magaca ciise masiix.
20. Waxaan diiday diidmada horumarka noloshayda ee magaca Ciise Masiix.
21. Waan diidanahay addoonsiga noloshayda magaca Ciise Masiix.
22. Waan diiday waanada xun ee noloshayda magaca Ciise Masiix.
23. Waan diidanahay shirkada xun ee noloshayda magaca Ciise Masiix.
24. Waan diidanahay nasiib xumo nolosheyda magaca Ciise Masiix.
25. Waan diidanahay shilka jidheed iyo kan ruux ahaaba nolosheyda magaca ciise masiix.
26. Waan diidanahay guusha u dhow cilladda, noloshayda magaca Ciise Masiix.
27. Wax kasta oo caqligeyga ah ayaan hoos ugaga dhacaa magaca Ciise Masiix.
28. Cadow kasta oo ii kordha, dab ku dhex firdhi magaca magaca Ciise Masiix.
29. Nimcada Ilaahay ayaan ku sii daayay noloshayda magaca Ciise Masiix.
30. Waad ku mahadsan tahay ciise masiix inaad iga dhigtay mid guuleysta.
article PreviousQodobbada Salaadda ee Xukunka leh ee Loogu Talagaley Burburinta Xumaannada Saamiga (Dheriga).
Next articleSoonka Iyo Salaadda Roob Xoogga
Sonia Quiroz Janaayo 8, 2020 saacadu markay tahay 1:52 pm
Waad ku mahadsan tahay fikirka salaaddaan runtii
Waan helay eraygan oo aan ugu duceeyo kor u qaadista farxaddayda
Ducada Gabadheyda Guul
14 Salaadda ka baxso deynta maaliyadeed
25 Qodobbada Salaadda ee Daawaynta Dhammaan Jiritaanka Bukaanka iyo Cudurada
Qodobbada Salaadda ee La Yiraahdo Inta Aadan Wareysiga U Bixin